D5Sense चार्जिंग स्टेशन र DXNUMXSense नियंत्रक PSXNUMX [अनबक्सिंग] को लागि ग्याजेट समाचार
प्लेस्टेशन। यो पहिलो उपयोगकर्ताहरुमा पुग्ने छ जसले नोभेम्बर १ on मा यसलाई रिजर्भ गर्न मद्दत गरे। जे होस्, धेरै खेल र सामानहरू एक हप्ता अगाडि सारिएको छ ताकि डेलिभरी वा डेलिभरी मार्गहरू पूरा गर्न नपरोस्। यस शिरामा, हामीले पहिले नै दुई सब भन्दा महत्त्वपूर्ण PS19 सामानहरू प्राप्त गर्यौं र हामी तपाईंलाई तिनीहरू देखाउन चाहन्छौं।
हामीसँग नयाँ डुअलसेन्स चार्ज स्टेशन र प्लेस्टेशन D डुअलसेन्स नियंत्रक पत्ता लगाउनुहोस्। उनीहरूको गहिरो विश्लेषणमा उनीहरूलाई विस्तृत रूपमा जान्नुहोस् जुन हामीले उनीहरूका विशेषताहरू र प्रकार्यात्मकताहरू पूरा गर्दछौं, हामी तपाईंलाई तिनीहरूको बारेमा बताउन आएका छौं ताकि तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि तपाईं आफ्नो सेटअपमा कुन सामानहरू गुमाउन सक्नुहुन्न।
अन्य अवसरहरूमा हामी यस लेखको साथ भिडियोको रूपमा रोचक सामग्री सहित निर्णय गर्ने निर्णय गरेका छौं। हाम्रो YouTube च्यानलमा तपाईं यसलाई पाउन सक्षम हुनुहुनेछ अनबक्सिंग डुअलसेन्स चार्ज स्टेशन र नयाँ प्लेस्टेशन D डुअलसेन्स नियंत्रक, दुई सामानहरू जुन तपाईंको जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ, कुनै श .्का बिना।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं हाम्रो च्यानल मार्फत जानुहोस् र यसैले तपाईं हाम्रो सदस्यहरूको समुदायमा सामेल हुन अवसर लिनुहोस्। यस तरिकामा हामी तपाईं अधिक र अधिक राम्रो भिडियोहरू र उत्पादनहरू ल्याउन सक्छौं जुन हाम्रो विश्लेषणको लागि तपाईंको जीवनलाई सजिलो धन्यवाद बनाउँदछ।
1 PS5 को लागी DualSense चार्ज स्टेशन
2 प्लेस्टेशन for को लागि डुअलसेन्स नियन्त्रक
PS5 को लागी DualSense चार्ज स्टेशन
हामीले चार्जिंग स्टेशनका साथ शुरू गरेका थियौं, जुन मेरो प्लेस्टेशन stage चरणको दौडान मैले धेरै याद गरें र सोनीले अन्ततः समाधान गर्न सफल भयो। पहिलो भिन्नता भनेको DualSense नियन्त्रकले अब अगाडिको USB-C चार्ज पोर्टको अतिरिक्त, जॉयस्टिक्स बीच चार्ज पिनहरू समावेश गर्दछ।
यसको मतलब यो हो कि हामी नियन्त्रणलाई एक प्राकृतिक स्थितिमा लोड गर्न सक्षम हुन्छौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केबलहरू र जडानकर्ताहरू जस्तो लगाउने लुगा लगाउनु हुँदैन। यस तरिकाले, लोड धेरै हल्का हुन्छ।
यो कसरी p.mm मीमी ज्याकको वरिपरि रहेको धातु पिनलाई धन्यवाद छ हेडफोनको लागि हामी रिमोट कन्ट्रोलको रूपमा बप्तिस्मा लिइएको चार्जिंग स्टेशन प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं र त्यसमा दुई फिर्ता लिन योग्य स्प्रि .हरू छन्। जब डुअल सेन्स नियन्त्रणहरू राख्नुहुन्छ, एउटा सानो सिलिन्डर घुसाइन्छ जहाँ mm.mm एमएम जैक राम्रो पकड उत्पादन गर्न जान्छ, र चार्जिंग शुरू हुन्छ।
यो चार्ज पर्याप्त लामो केबलको माध्यमबाट गरिन्छ जुन प्याकेजमा समावेश छ, र USB-C मार्फत होइन। केबल आफ्नै शक्ति आपूर्ति संग आउँदछ जुन हामी कल्पना गर्छौं एकै साथ दुईवटा नियन्त्रणहरू चार्ज गर्न तयार हुनेछ।
उत्तम मूल्यमा डुअलसेन्स चार्जिंग स्टेशन खरीद गर्नुहोस्> LINK.
केबल लामो र पर्याप्त पातलो छ हामी डुअलसेन्स चार्जिंग स्टेशन राख्न सक्दछौं जहाँ हामी चाहिने धेरै ध्यान नखोजी चाहान्छौं। यो चार्जिंग स्टेशन एक तरीकाले डिजाईन गरीएको छ जुन PS5 लाई राम्ररी मेल खान्छ किनभने आकार अनिवार्य रूपमा हामीलाई अगाडिको सम्झना गराउँछ।
यो एक गैर पर्ची आधार छ र एक साथ केन्द्र मा पियानो ब्ल्याक प्लास्टिक र पक्षहरु को लागी कुनै न कुनै सेतो प्लास्टिक बाट बनेको छ। सत्य यो हो कि यो चार्जिंग बेस हो जुन विशेष रूपले आकर्षक डिजाइनको साथ प्रस्तुत गरिन्छ र जुन सबै खेलाडीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
मूल्य एक समस्या हुनु हुँदैन, र यो यो हो कि हामी तुलनात्मक रूपमा सस्तो उत्पादनको सामना गरिरहेका छौं। तपाई यसलाई २eयूरोबाट बेच्न सक्नुहुनेछ बिक्रीको सामान्य बिन्दुहरू जस्तै अमेजन (लि or्क) वा एल कोर्टे ईन्ग्लिसमा। इमान्दारीतापूर्वक, यो मलाई लाग्ने सामानहरू मध्ये एक हो जस्तो कि हामीले सम्झनु हुँदैन।
यस उत्पादनलाई अमेजनमा सर्वश्रेष्ठ मूल्यमा खरीद गर्नुहोस्।
विशेष गरी सोनीले अधिक प्राकृतिक चार्ज मेकानिजम शुरू गरेर समुदायको कुरा सुनेको छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएर। र त्यसले नियन्त्रणहरूलाई लगातार चार्जिंग पोर्टहरू मार्फत रोक्दछ, जुन DualShock4मा एकदम सामान्य थियो, जुन तिनीहरूको स्थायित्वको कमीले स्पष्ट थियो।
प्लेस्टेशन for को लागि डुअलसेन्स नियन्त्रक
स्पष्ट रूपमा, जब हामी प्लेस्टेशन buy खरीद गर्छौं भने यो डुअलसेन्स नियंत्रकको भित्र आउँछ। वास्तवमा, प्लेस्टेशन the मा डुअलसेन्स नियन्त्रकको अतिरिक्त यूएसबी-ए देखि युएसबी-सी केबल पनि समावेश छ, जुन हामीले छुट्टै डुअलसेन्स कन्ट्रोलर खरीद गर्दा भेट्टाउने छैनौं, जुन कुरा मैले पूर्ण रूपमा बुझिन।
प्राविधिक फोहोर घटाउने चलनमा सामेल हुँदै, सोनीले कमान्ड र निर्देशन म्यानुअल भन्दा DualSense बक्समा समावेश नगर्न विकल्प छ। हामीले हाम्रो DualSense चार्ज स्टेशन पूरा गर्नका लागि अतिरिक्त DualSense कन्ट्रोलर एकाई खरीद गरेका छौं।
यो DualSense रिमोट कालो र सेतो प्लास्टिक बाट बनेको छ, बजारमा हालै मात्र संस्करणहरू उपलब्ध छन्। मुख्य बटन पारदर्शी र सेतो भएको छ, क्लासिक र behindहरू छोडेको (हरियो, गुलाबी, रातो र निलो)। हल्का रियरले मात्र हामीलाई सोनी लोगो र USB-C पोर्ट देखाउँदछ।
अमेजन> मा PS5 को लागी DualSense नियंत्रक किन्नुहोस् LINK.
जॉयस्टिकले हामीलाई डुअल शक of को धेरै सम्झाउछ नयाँ बाह्य सुदृढीकरण र थोरै आड्रेन्ट रबरको साथ। यी मध्ये हामीसंग PS बटन छ जुन अब प्लेस्टेशन लोगो द्वारा प्रतिनिधित्व गरीएको छ र लामो छैन। हामीसँग यो बटनको तल मात्र छ नयाँ "म्यूट" बटन जसले हामीलाई एकै पल्टमा माइक्रोफोन म्यूट गर्न अनुमति दिनेछ (यसले पनि सक्रिय हुन्छ)।
तिनीहरूको भागको लागि, साझेदारी र विकल्प बटन तिनीहरू लोगो परिवर्तन गरिरहन्छन् तर समान कार्यहरूसहित। ट्र्याकप्याडले सेन्टर स्टेज लिन्छ जुन हामीलाई डुअलशक4को समान तरीकामा अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिनेछ। सूचक लाइट रिंग अब यो ट्र्याकप्याड वरिपरि अवस्थित छ, फिर्ता पछाडिको पूर्ण फ्लैट छोड्दा।
तल हामीसँग mm. mm एमएम ज्याक पोर्ट हुनेछ कुनै पनि प्रकारको हेडसेट सजिलैसँग थप्न महंगा विकल्पहरूको सहारा बिना। DualSense चार्ज स्टेशनका लागि चार्ज गर्ने पिनहरू यही स्थानमा छन्।
अन्तमा, यस डुअलसेन्सले अब ह्याप्टिक इन्टेलिजेन्ट कम्पन प्रणाली समावेश गरेको छ किनकि यो आईफोन १२ प्रोमा हुन्छ (उदाहरण को लागी) जसको पहिलो विश्लेषणले धेरै राम्रो नतीजा प्राप्त गरेको छ। अन्तर्क्रियात्मक सेन्सरहरू र नियन्त्रणकर्तामा एक्सेलेरोमीटरहरूको लागि पनि यही जान्छ।
फिर्ता राम्रो पकडको लागि कुनै न कुनै प्लास्टिकको बनेको छ, क्लासिक प्लेस्टेशन बटन प्रतिनिधित्व। कमान्ड पनि त्याग्नुहोस् डुअलसेन्स सामान्य पछाडि स्टिकर जुन सधैं समाप्त हुन्छ मेटाइन्छ। अन्तमा, हामीसँग अब स्पिकर मात्र छैन, रिमोटमा सानो माइक्रोफोन पनि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » DualSense चार्ज स्टेशन र PS5 DualSense नियंत्रक [अनबक्सिंग]
के तपाईंलाई थाहा छ यदि लोड लोड भए पछि लोड केन्द्रमा राखिएको नियन्त्रण छोड्न सक्नुहुन्छ?
यदि यो जडानमा राखिएको छ भने यसले ब्याट्रीको उपयोगी जीवन कम गर्दछ ????
नमस्कार, त्यहाँ कुनै समस्या छैन, तपाईं यसलाई सँधै चार्जिंग सेन्टरमा छोड्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईंलाई आवश्यक परेको खण्डमा मात्र लिन सक्नुहुनेछ, एक पटक ब्याट्री चार्ज भएपछि यसले चार्ज गर्न रोकिनेछ।